Vondron’ny fikambanana sembana: tetikasa maro mipaka any amin’ny fampandrosoana | NewsMada
Vondron’ny fikambanana sembana: tetikasa maro mipaka any amin’ny fampandrosoana
Anio 3 desambra, fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny olona sembana, ankalazaina izany any Ranohira. Ny lohahevitra iray lehibe ifanakalozana ny fandraisan’izy ireo anjara ho amin’ny fampandrosoana maharitra. Resaka nifanaovana tamin’ny tale mpanatanteraka ny Vondron’ny fikambanana na PFPHM*, Radafiniantsoa Josoa Robinson.
– Gazety Taratra : Lohahevitra nosafidinareo ny fandraisanareo anjara feno ho amin’ny fampandrosoana maharitra, ny anjara toeran’ny sembana amin’izany ?
* Radafiniantsoa Josoa Robinson : Miezaka sy manentana ny rehetra, fanjakana sy firaisamonim-pirenena ny hidiranay amin’ny rafitra misy. Ny mampalahelo anefa, matetika tsy voaasa izahay. Tanjona amin’ny 2030 mba tsy hisy atao ankilabao amin’ny asa fampandrosoana, hampanana asa ny sembana. Miasa tena ny maro, saingy tsy mahavelona, koa ilaina ny fiofanana arakasa, ary tsy tokony ho sakana ny fandraisana mpiasa sembana.
– Misy ve ireo tetikasa nofaritanareo eo anivon’ny Vondron’ny fikambanana ?
*Ahitana fikambanana samihafa any amin’ny faritra maro. Manana ny tetikasany daholo ireo koa raha avondrona izany, ny fandraisana anjaran’ny olona sembana eo amin’ny sehatry ny fihariana sy sosialy ; manome lanja ho anay amin’izay rafitra misy ; manamora ny fifampiresahana hanohanana sy hanamafisana ny asan’ny fikambanana.
– Ohatra azonao lazaina amin’ireo tetikasa mipaka any amin’ny fampandrosoana ?
* Eo ny tetikasa Mirazo, fampiharana ny Fifanarahana iraisam-pirenena ho fiarovana ny zon’ny sembana. Najoro ny taona 2016, vatsin’ny Vondrona eoropeanina vola tantanin’ny Humanité&Inclusion. Any amin’ny faritra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana misy io tetikasa io. Vita amin’izany, ohatra, ny fanaraha-maso ny asan’ny sembana sy fanangonam-baovao momba azy ireo. Tetikasa iray Bea-Zo, fampidirana ireo jamba sy marenina an-tsekoly, any amin’ny faritra Diana sy Analanjirofo. Tetikasa Tomady ho an’ny famatsiam-bola, fanohanana teknika sy fanofanana. Hita izany amin’ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana. Ary ny tetikasa Fandiorano, famatsian-drano eto amin’ny faritra Analamanga, tarihin’ny WaterAid.
– Eo ambany fitantanan’ny minisiteran’ny Mponina ianareo, ny ataon’io minisitera io ?
* Kely tetibola indrindra io minisitera io, tsy afaka manampy ny olona marefo. Tsapa koa ny tsy fanomezan-danja ny sembana, satria ilay direction nisy teo aloha, naverina ho service, ankehitriny. Ny tena olana, tratran’ny fanilikilihana ireo sembana, indrindra ny any ambanivohitra. Enta-mavesatra ho an’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina izany raha tsy handraisana andraikitra sy mandray andraikitra, nefa tokony handray anjara feno amin’ny fampandrosoana.
PFPHM* : Plateforme des Fédérations des Personnes Handicapées de Madagascar